Edere site Tranquillus | Dee 17, 2020 | Edere ederede na nkwupụta okwu ọnụ
Nkọwapụta na akwụkwọ ozi ederede n'efu maka nkwụghachi ụgwọ mmefu ọkachamara gị. Ha niile na-emefu ozi nke gị. Maka mkpa na mmemme nke azụmahịa gị bụ ọrụ ya. Iwu oru na-enye, ma na ngosi nke akwụkwọ nkwado ma ọ bụ n'ụdị nkwụnye ego ọnụego, na a ga-akwụ gị ụgwọ maka ego ị gafere. Otú ọ dị, usoro ọgwụgwọ nwere ike mgbe ụfọdụ na-egbu mgbu ma na-ewe oge. Ya mere, ọ dị gị n'aka ịhazi onwe gị na ijide n'aka na ị ga-eweghachi ego gị. O nwechaghị ohere na ndị ọzọ ga - eche maka ya maka gị.
Kedu ụdị mmefu azụmahịa dị iche iche?
Site n'oge ruo n'oge, ị nwere ike ịdabere na mmefu azụmahịa n'oge ọrụ gị. Ndị a bụ mmefu ndị dị mkpa ị ga-emerịrị n'oge arụmọrụ nke ọrụ gị yana nke metụtara arụmọrụ nke ọrụ gị. Ọtụtụ n'ime akụkọ mmefu a bụ ọrụ nke ụlọ ọrụ.
Ihe a na-akpọ mmefu ọkachamara nwere ike were akụkụ dị iche iche, nke kachasị mkpa bụ:
Gbọ njem na-akwụ ụgwọ: mgbe ị na-eme njem site na ụgbọ elu, ụgbọ oloko, bọs ma ọ bụ tagzi maka ozi ma ọ bụ gaa nzukọ ọkachamara;
Ọnụ Mileage: ọ bụrụ na onye ọrụ were ụgbọ ala nke ya maka njem azụmahịa (nke agbakọtara site na kilomita ma ọ bụ abalị ụlọ nkwari akụ);
Nchịkọta nri: maka nri ehihie azụmaahịa;
Ndị ọkachamara na-agagharị agagharị: ejikọtara ya na ngbanwe nke ọnọdụ nke na-eduga na ngbanwe ebe obibi.
Ihe ndekọ akwụkwọ,
Ọnụ ọrụ ọrụ telifon,
Costsgwọ nke iji ngwaọrụ NTIC (ozi ọhụrụ na teknụzụ nkwukọrịta),
Kedu otu esi akwụghachite mmefu ndị ọkachamara?
N'agbanyeghị ụdị mmefu a mebiri, usoro na ọnọdụ maka ịkwụghachi mmefu ahụ nwere ike iburu ụzọ abụọ. Ma a na-enye ha ya na nkwekọrịta ọrụ, ma ọ bụ bụrụ akụkụ nke omume na ụlọ ọrụ ahụ.
Kwụ ụgwọ nwere ike ịkwụ ụgwọ site na ịkwụghachi ụgwọ ọnụahịa efu, ya bụ ịsị ịkwụ ụgwọ niile akwụgoro. Ihe ndị a metụtara ụgwọ ọrụ ọrụ telegram, iji ngwa ICT, agagharị ọkachamara, ma ọ bụ ụgwọ ndị ọrụ ewepụtara na mba ọzọ. Dị ka ndị dị otú a, onye ọrụ ahụ na-enyefe onye were ya n'ọrụ ọtụtụ akụkọ mmefu ya. Ijide n'aka na ị ga-edebe ha ma ọ dịkarịa ala afọ atọ.
O nwekwara ike ịbụ na a ga-akwụ gị ụgwọ oge ụfọdụ ma ọ bụ site n'oge ruo n'oge. A nakweere usoro a maka ụgwọ akwụghachi, dịka ọmụmaatụ, maka ndị na-azụ ahịa azụmahịa. N'okwu a, iwu akwadoghị onye nke ikpeazụ iji kwado mmefu ya. Ndị nlekọta ụtụ na-edobe ugo ma na-agbanwe dịka ọdịdị nke mmefu (nri, njem, ebe obibi nwa oge, iwepụ, ego mmachi akpa). Agbanyeghị, ọ bụrụ na agafeghị oke, onye were gị n'ọrụ nwere ike chọọ akwụkwọ nkwado gị. Ekwesiri ighota na ndi isi ulo oru anaghi enwe ego a.
Usoro maka ịkwụ ụgwọ nkwụghachi ụgwọ nke mmefu ndị ọkachamara
Dị ka iwu n'ozuzu, a ga-akwụghachi ụgwọ mmefu gị mgbe emechara akwụkwọ nkwado ahụ na ngalaba ndekọ ego ma ọ bụ onye njikwa ọrụ mmadụ. Onu ogugu ga egosiputa na ugwo ugwo ozo gi ma nye ya ego gi aka.
I nwere afọ 3 i nwere iji nye ihe akaebe nke mmefu ọkachamara gị wee si otú a kwụghachi gị. Gafere oge a, iwu ejighịzi onyeisi gị ịkwụ ha ụgwọ. Ọ bụrụ n’amaghị ama ma ọ bụ site n’ichefu ma ọ bụ ihe ọ bụla kpatara na anyị anaghị eweghachi ego gị. Ọ kachasị mma itinye aka ngwa ngwa site na izipu akwụkwọ ozi na-arịọ maka nkwụghachi ụgwọ na ụlọ ọrụ gị.
Iji nyere gị aka, lee akwụkwọ ozi abụọ iji mee arịrịọ gị. Nke ọ bụla. Karịsịa, jide n'aka na itinye akwụkwọ izizi mbụ ma debe onwe gị.
Ihe nlere nke leta maka arịrịọ nkịtị maka ịkwụghachi ụgwọ mmefu ndị ọkachamara
Aha ikpeazụ Aha onye ọrụ
(Obodo), na… ()bọchị),
Isiokwu: Arịrịọ maka nkwụghachi ụgwọ mmefu ọkachamara
Gbaso mmefu mebiri n'oge ọrụ ikpeazụ m. Ma ugbu a, na-achọ ka m rite uru na nkwụghachi ụgwọ mmefu ọkachamara m. Ana m ezigara gị ndepụta zuru oke nke ịkwụ ụgwọ m dị ka usoro ahụ si dị.
Ya mere, emere m njem site na _____ (ebe ọpụpụ) gaa _____ (ebe ebe njem njem azụmahịa) site na ________ ruo _____ (ụbọchị njem) ịga ọtụtụ nzukọ dị mkpa maka mmepe ụlọ ọrụ anyị. Enwere m ụgbọ elu ebe ahụ na azụ n'oge njem m wee gbaa ọtụtụ tagzi.
Na mgbakwunye na mmefu ndị a, a na-akwụ ụgwọ ụlọ obibi m na ụgwọ nri m. Akwụkwọ nkwado na-akwado onyinye m niile jikọtara na arịrịọ a.
Na-echere nzaghachi dị mma n'aka gị, a na m arịọ gị ka ịnata, Nna m, ekele m ejiri ekele.
Ihe nlere nke leta na-arịọ ka ịkwụghachi ụgwọ mmefu ọkachamara ma ọ bụrụ na onye were gị n'ọrụ ajụ gị
Isiokwu: Ikwu maka nkwụghachi ụgwọ mmefu ndị ọkachamara
Dịka akụkụ nke ọrụ m, emeela m njem ọtụtụ azụmahịa na mba ọzọ. Dịka onye ọrụ [ọrụ], agara m (ebe njedebe) ụbọchị 4 maka ọrụ ụfọdụ metụtara ọnọdụ m.
Site na ikike onye njikwa akara m, ejiri m ụgbọ nke m gaa. Emewo m njem na ngụkọta nke [kilomita] kilomita. Na nke a ka a na-agbakwunye ụgwọ nri na ọtụtụ abalị na nkwari akụ, maka ngụkọta nke [ego] euro.
Iwu ahụ kwuru na ụlọ ọrụ ga-akwụ ụgwọ mmefu ndị a. Agbanyeghị, n'agbanyeghị agbanyeghị akwụkwọ nkwado niile enyere ndị ngalaba na-aza ajụjụ ego mgbe m laghachitere, anatabeghị m ụgwọ metụtara ya ruo taa.
Nke a bụ ihe mere m ji arịọ gị ka ị tinye aka ka m wee kwụghachi ụgwọ ozugbo enwere ike. Ga - ahụ otu akwụkwọ ọnụahịa niile ejiri gosipụta arịrịọ m.
Mgbe ị na-ekele gị maka enyemaka gị, biko nabata, Maazị Director, mmesi obi ike nke m tụlere.
Download “Nlele-akwụkwọ-maka-a-nkịtị-arịrịọ-maka nkwụghachi-nke-ọkachamara-mmefu.docx”	Ihe atụ-nke-akwụkwọ ozi-maka-a-nkịtị-arịrịọ-maka nkwụghachi-nke-ọkachamara-mmefu.docx - Ebudatara ugboro 4623 - 21 Kb
Download “Ihe nlele-leta-maka ịkwụghachi-ụgwọ-nke-ọkachamara-mmefu-na-ịjụ-ajụ-site na-ewe ya n'ọrụ.docx”	Ihe atụ-nke akwụkwọ ozi-maka-ịrịọ maka ịkwụghachi-ụgwọ nke ndị ọkachamara-mmefu-na-ajuju nke ịjụ site n'aka onye were gị ọrụ.docx - Ebudatara 4587 ugboro - 13 Kb
Akwụkwọ edemede: rịọ ka a kwụọ ụgwọ mmefu ndị ọkachamara January 8th, 2022Tranquillus
gara agaEnwere m ikike ịkwụsị ajụjụ ọnụ ọkachamara na afọ 2021 na-enweghị ntaramahụhụ?
-esonụOge ezumike na ụbọchị ezumike: enwere ike ịmanye ma gbanwee ụbọchị ha rue June 30, 2021